Athletic Bilbao oo u gudubtay wareega siddeeda ee Copa del Rey kaddib markii ay ka adkaatay kooxda Barcelona… +SAWIRRO – Gool FM
(Bilbao) 20 Jan 2022. Athletic Bilbao oo u gudubtay wareega siddeeda ee Copa del Rey kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2 kooxda Barcelona oo marti ugu ahayd garoonka San Mamés, kulankii wareega 16-ka ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Athletic Bilbao iyo Barcelona ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 2-aad ee bilowgii ciyaarta kooxda Athletic Bilbao ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay laacibkooda Iker Muniain kaddib markii uu ka caawiyay goolkan saaxiibkiis Nico Williams.
20 daqiiqo marka ay dheesha sii mareysay kooxda Barcelona ayaa dhalisay goolka barbardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay laacibkooda Ferran Torres oo caawin ay kaga timid saaxiibkiis Sergio Busquets.
Daqiiqadii 86-aad kooxda Athletic Bilbao ayaa markale hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 2-1 ka dhigay laacibkooda Iñigo Martínez.
Laakiin 90 + 3 marka ay ciyaarta mareysay Barcelona ayaa markale la timid goolka barbardhaca kaddib markii uu 2-2 ka dhigay dheesa da’ayarkooda Pedri oo caawin ka helay Dani Alves.
90-kii daqiiqo ee loogu tala galay ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbardhac 2-2 ah, waxaana lagu daray 30 daqiiqo dheeri ah, si loo xaqiijiyo kooxda u gudbeysa wareega xiga ee siddeeda.
Daqiiqadii 105 + 2 kooxda Athletic Bilbao ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay xiddigooda Iker Muniain, dheesha ayaa waxay sidaas ku noqotay 3-2 looga hoggaaminayay Barcelona.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 3-2 ay Athletic Bilbao kaga adkaatay kooxda Barcelona oo soo booqatay, Bilbao ayaa iska xaadirisay wareega xiga siddeed dhammaadka ee tartanka Copa del Rey.